Kampanii Youtube Irraa Aariin Qaba: Dubartii Waajjira Youtube Irratti Dhukaasa Bante
Nasim Aghdam, dubartii waajjira Youtube irratti dhukaasa bante
Dubartiin waajjira haadhoo Youtube kan Sanfrancisco cina jiru keessatti dhukaasa bantee utuu of hin galaafatin dura namoota sadii madeessite kampanii sana irraa yeroo dheeraaf komee kan qabdu ta’uu angawoonni US beeksisaniiru.
Qorattoonni akka jedhanitti kan umuriin 39 Naasim Najaafii Aghdaam San Diego ka jiraataa turte yoo ta’u marsariitii ishee kan kuduraa qofaa nyaachuu irratti fuuleffatee fi vidiyoo achi irratti dhiyaate youtube na duraa gulaale jette. Abbaan ishee akka jedhanitti Youtube viidiyoo isheen maxxansituuf maallaqa baasuufii dhaabuu isaa himataa turte.
Addunyaa dhugaa ta’e keessa haasaan tola dhaga’amu hin jiru. kan deggersa hin qabaanne dhugaa dubbachuu keef hacuucamtaa jedha maxxansaan marsariitii ishee irra jiru. Qixxee guddachuuf carraan youtube ta’e marsariitii vidiyoo qooddatan ka biroo bira hin jiru jedha barreffamni kun.
Lammii Iraan kan taate Aghdam kampaniin youtube kan ani maxxaansu dawwattoota akka hin qabaanneef jecha na duraa gulaale jette.
Bakka namoonni hedduun taa’anii laaqana nyaatanitti dhukaasi isheen bante sun eenuy irratti iyyuu kan qiyyaafate jedhee kan hin amanne ta’uu poolisiin beeksiseera.